भोलि देवीको प्रतिरुप अनि ममता कि खानी आमाको मुख हेर्ने दिन, यो सुन्दर संसार देखाइदिने आमालाई नमन ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भोलि देवीको प्रतिरुप अनि ममता कि खानी आमाको मुख हेर्ने दिन, यो सुन्दर संसार देखाइदिने आमालाई नमन !
पूर्णप्रसाद मिश्र – प्रत्येक वर्ष वैशाखकृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व भोलि देशभर मनाइँदैछ । शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित), आचार्य र पिताभन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उनबाट शुभाशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ । छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्राराम्रा लुगा लगाउने र मीठामीठा–तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ । आमा नभएका भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिदादानसहित भोजन गराई दिवङ्गत आमा र उनले गरेका महान् एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन् ।
भुलेर पनि प्रयोग नगर्नुहोस यस्तो सिन्दुर ऋणमा डुब्नसक्छन पति
४५ बर्षकी भइन् बलिउडमा चम्किएकी शिल्पा शेट्टी
सुरविना कार्किको जीब्रो काढ्न बाध्य पार्ने ‘बोल्ड’ अवतार, हेराैँ तस्बिर